Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar oo Booqasho Tacsi ah u Tegey Tehran Iran - Awdinle Online
Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar oo Booqasho Tacsi ah u Tegey Tehran Iran
January 04, 2020 (Awdinle Online) – sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda turkey ee anadolu, Ra’iisul Wasaare ku-xigeeen ahna Wasiirka arimaha dowladda Qatar ayaa booqasho ku tegey magaaladda Tehran ee dalka Iran ka dib dilkii General Qaasim Suleymaani Talihii Ciidanka Ilaalada Kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Booqashada Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa waxaa lagu sheegey in ay ku qotontey tacsida General Suleymaani oo ay ciidanka mareykan ku dileen 03 January 2020 xili habeen ah meel u dhow garoonka diyaadaha magaaladda Baqdaad.
Dadka ka faalooda arimaha istaraatiijiyadda ayaa sheegey in dabeecadaha siyaasadeed ee dowladda Qatar ay yihiin kuwo aad loola yaabo oo qar iska tuurnimo ah.
Ma jiro ilaa iyo hada Dowlad Islaam ah oo ka tacsiyeysey ama sheegtey in ay ka xun tahay dilka General Suleymaani.
Previous articleQatar Foreign Minister Visits Iran after Death of General Soliemani
Next articleKenya oo ka hadashay weerarkii lamu